GREENHOUSE "BUTTERFLY" SAMEE NAFTAADA: WAX WALBA OO KU SAABSAN RAKIBIDDA DHISMAHA - DHISMAYAASHA
Goosashada midabkeedu hooseeyo baalashka aqalka dhirta lagu koriyo ee Butterfly
Muuqaalka Greenhouse "Kaararka" runtii waxay u egyihiin balwad leh baalal furan. Marka la xiro, waxay aad u egtahay cocoon, gudaha taas oo heerkulka la rabo iyo microclimate loo hayo.
Tani waa dhismo ku habboon, kaas oo la dhiso wakhti gaaban, oo aad si dhaqso ah u demin kartid iyo dadaal gaar ah.
Aqalka dhirta lagu koriyo wanaagsan ee geedo sii kordhaya. Tani waa suurtagal sababtoo ah joogitaanka gudaha ee qadar yar oo dhul ah. Xayawaanku wuxuu u kululaa si dhakhso ah, sidaas darteed geedo u koraan si dhakhso ah.
Tirada wax soo saarka guud ayaa u eg sidan:
Dhererka - 1.5 mitir
Dhererka dheer ee aqalka dhirta lagu koriyo - 1.25 mitir
Aagga - 5 mitir oo laba jibbaaran. mitir
Miisaanka - 26 kg.
Faa'iidooyinka dhismaha beerta oo aad u badan:
Nolosha adeegga dheer: ku saabsan toban sano.
Raaxo helitaanka dhirta. Albaabka laga galo gudaha waxaa laga samayn karaa labada dhinac, si aad si fudud ugu gudbi karto xitaa dhinaca geeska.
Ventansku wuxuu u oggol yahay si joogto ah diyaarinta.
Polycarbonate Cellular loo isticmaalo dhismaha dhismayaasha waxay u adeegtaa sidii lagu kalsoonaan karo ilaalinta seedling laga bilaabo xagasha heerkulka iyo shucaaca ultraviolet.
Tusaaluhu waa wax macquul ah, miisaan culus, awood sare iyo dabacsanaan. Waa mid aad u lagu kalsoon yahay: si fudud u istaagaan lakab toban mitir ah oo baraf ah iyo gustsi xoog leh oo dabayl ah oo si fudud u adkaata xitaa jiilaalka ugu daran.
Naqshadeynta waa sahlan tahay in la demiyo, haddii loo baahdo.
Isdhexgalka waxay kuu ogolaaneysaa inaad u qaaddo "geedka barafka" xitaa gaariga rakaabka caadiga ah.
Qalabkoodu waa mid sahlan uma baahna dhismayaasha aasaaska.
Naqshaduhu waxay yeelan karaan qiyaaso kala duwanoo aan ahayn kaliya kuwa caadiga ah ee looga dooday kore. Laakiin qalabka dhismaha waa isku mid. Gaar ahaan, shaxanka wuxuu noqon doonaa bir-caag ah ama noocyo caag ah oo keliya.
Waxaa jira wareegyo adaglaga yaabaa inay ka kooban tahay dhowr qaybood.
Qalabka daboolaya Greenhouse "Butterfly" waxaa laga sameeyey unug polycarbonate. Xaalado dhif ah, polietylene ayaa loo isticmaalaa.
Waa maxay dhirta ay ku habboon tahay koritaanka?
Maadaama moodhku uu fudud yahay isticmaalka, waxaa loo isticmaali karaa koritaanka geedo, ubax, khudaar iyo xataa dalagga qaraha Intaa waxaa dheer, sanadka oo dhan.
Maalmaha xagaaga diiran, waxaa ugu fiican in la ilaaliyo furan. Laakiin marka billowga cimilada qaboobaha ah waa inay ilaaliyaan dhirta lagu beeray. Marka la xirayo, gudaha waxaa lagu kaydiyaa beeritaanka. saameynta dhirta lagu koriyo. Waxay u ogolaataa xilliga dayrta si loo kordhiyo muddada dhaxan ee khudaarta, iyo guga - si ay u bilaabaan iyaga dhowr todobaad ka hor waqtiga.
Haddii aqalka dhirta lagu koriyo waxaa lagu dhisay tayo sare, ka dibna gudaha waxaad ku kori kartaa noocyada kala duwan ee geedo, laakiin sidoo kale basbaaska, kaabajka iyo xataa qajaarka iyadoo leh yaanyada
Digniin! Haddii aad qorsheyneyso inaad ku beerato dhowr nooc oo qudaar ama khudrad ah, waxaa ugu fiican in aad dhisatid qaab dhismeedka qaybta. Tani, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo filim caag ah oo caadi ah.
"Butterfly", sida shey kasta oo noocaas ah, wuxuu leeyahay cillado. Haddii aan ka hadleyno qaababka taxanaha ah, waxaanu xusuusan karnaa waxyaabaha soo socda qasaaro:
Cirifka midabka leh ee muraayadda ayaa ku dhawaad ​​marnaba tayada. Rinjiga maaha wax aan caadi ahayn miro-dhalashomarka cajaladda laga saaro ama xirmooyinka lagu xiro inta lagu jiro kulanka.
Goobaha waxaa badanaa laga helaa burrs. Si aad u baabi'iso, waa inaad adigu is-qabsataa faylka oo aad gacanta ku qabatid.
Badanaa tilmaamaha waxaad ka heli kartaa talo ku saabsan bedelida filinka polycarbonate ee gacanta. Laakiin tani waa bedel aan kala duwaneyn. Polycarbonate - dabacsanaan badan. Wuxuu awood u leeyahay in uu ku tiirsanaado booska hoose si uu ugu tiiriyo dhismaha weyn ee dhismaha iyo trim hoose. Iyo halkan filim tan si cad ma wanaagsana.
Isku-dubbarididda moodeelka soo-saarka leh ee cabbirka la rabo ma fududa. Taas awgeed waxaad u baahan tahay inaad leedahay waayo-aragnimo adag dhismaha qaab-dhismeedyadaas. Maqnaanshaha wuxuu joogi karaa meel ballaadhan, meel cidhiidhi ah. Raaxo la'aan iyo rabbo. Waxay yihiin cabbirka yar, marka laga reebo, si fiican uma qabtaan oo toosi karaan.
Inkasta oo xaqiiqda ah in qaabka la iibsaday uu yahay mid aad u jilicsan oo si sahal ah uga gudbi kara meel, haddii loo baahdo, waa inaad waqti ku qaadataa xidhitaanka wadajir ah. Sidoo kale waxay u baahan doontaa qadar gaara oo ah shukumaan silikoon ah oo khaas ah.
Dhismaha aqalka dhirta lagu sameynaayo "Butterfly"
Marka hore, si aad u rakibtid nooca aad u baahan tahay inaad doorato meel sax ah Hoos u dhig haddii qaab-dhismeedka la dhigi doono laga bilaabo waqooyiga ilaa koonfur. Kadibna waxtarka shaqadiisu waxay noqon doontaa ugu badnaan waxayna bixin doontaa miro wanaagsan.
Ma dooran kartid meelaha hoose halkaas oo biyaha dhaadheer ku raran yihiin. Meelaha ugu hooseeya biyaha ayaa laga yaabaa inay ka baxaan dhulka. Dalagyada koray ee microclimate qoyan si fiican u koraan, ka dibna dhakhso u dhinto. Dhibaatooyinka.
Kama dhigan kartid aqalka dhirta lagu koriyo ee meelaha dabaysha.
Waa muhiim! Goob loo sameeyo beeraha mustaqbalka waa inay ahaadaan xataa iyo iftiinka ugu badan inta lagu jiro maalinta. Nalalka la'aanta waxay si xun u saameeyaan xaaladda iyo koritaanka dhirta.
Meesha waa in horay loo soo doortaa, inta ka horaysa golaha. Qulqulka sarehalkaas oo ay jiri doonto "balanqaad". Uma baahna aasaas, laakiin saldhigga ku kalsoonaanta aad sameyn kartid laga bilaabo qoryaha ama la taaban karo. Inta aadan bilaabin shaqada, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso wax kasta oo aad u baahan tahay.
Tayada qaab lagu taliyey in la isticmaalo biraha ama geedka. Kiis labaad, qalabka haboon waa geed. Marka hore, doorbididda waxaa la siiyaa tuubooyinka birta ee dhexroor yar. Waayo duubista waa la doortaa polycarbonate oo leh muraayad sun ah. Xaaladda marka jirku uu u muuqanayo in laga sameeyo biraha, u diyaarso horay u marinta mashiinka, mashiinka alxanka, jilbaha iyo sawir wareega.
Sawir sameynta guryaha - Tallaabo qasab ah in lagu abuuro aqalka dhirta lagu koriyo ee gacmahaaga.
Wixii dhisme qibrad leh ayaa loo baahan doonaa xisaabin horudhac ah. Tani waa in la sameeyaa, la siiyaa cabbirka, qiimaha iyo qalabka loo isticmaalo. Sida caadiga ah, qiyaasaha cabbirka cabbirka ayaa ku haboon aag kasta. Laakiin, haddii aan ka hadlayno koritaanka dhirta waaweyn, xajmiga waa la kordhin karaa. Heerka ugu caansan waa mitir ama hal iyo badh.
Haddii aqalka dhirta lagu dhejiyo wakhti gaaban, sawirku si fiican ayaa loo sameeyaa, oo soo jeedinaya deg deg deg ah. Haddii ay lagama maarmaan tahay, mashaariicda nalalka iyo kuleylka ayaa si gooni ah loo abuuray
Guryaha aqalka dhirta lagu dhejiyo, ayaa lagu dhisaa gacanta faa'iido leh oo ka yimaada dhinaca dhaqaalaha doorasho. Waxa uu tixgelin doonaa dhammaan sifooyinka guud ee agagaarka caasimadda waxana uu u oggolaanayaa milkiilaha in uu dareemo sida master macquul ah.
Dhiso aqalka dhirta lagu koriyo "Butterfly"
Marka booska la doorto, iyo qalabyada qalabka la qaado, waxaa suurtagal ah in la bilaabo dhismaha.
Diyaari qorshaha. Ka saar qashinka oo dhan kana soo saar lakabka sare ee carrada.
Qalabka aqalka dhirta lagu koriyo ayaa si adag u istaagay, waxaa ugu wanaagsan in la dhiso aasaaska. Si arrintan loo sameeyo, qodo godad, biyo-nadiifinta ayaa la dhigaa, geesaha waxaa la xoojiyaa oo lagu buuxiyaa xal ciid ah iyo sibidh. Kadibna wuxuu soo saaray salka lebiska cas.
Ku rakib qaab. Haddii uu yahay maadi, alxanka ama bolting ee qaybihiisa waa la isticmaalaa. Xuddunta, daboolay wakiilka ka hortagga dhoobada, waxay ku xiran tahay salka salka. Xaaladda marka looxa loo isticmaalo dhismaheeda, waa in lagu daaweeyaa antiseptic oo la gooyaa. Xuddunta waa inay lahaataa beam dhexe si ay u dhejiso xididada ay baalalka baalasha la saaro - qayb muhiim ah ee aqalka dhirta lagu koriyo.
Polycarbonate Cell waa la gooyaa iyadoo la isticmaalayo sawir wareeg ah oo ku dheggan qaabka. Ujeedadaas awgeed, naqshad-jajab-saarida, qalabka wax lagu dhejiyo iyo kuleyliyaha kuleylaha ayaa faa'iido leh.
Dhamaadka dhinacyadaasi waxay ku xiran yahiin profiles, waxaana la isku mariyaa qalabka silikonka. Dhinacyada dhismaha Taageero gaar ah ayaa lagu rakibay, Qaybaha saqafka oo kor loo qaaday.
Isku-dabiiciga ah ee aqalka dhirta lagu kariyo waa mid adag, waa ku filan in la raaco tilmaamaha oo yeesho xirfadaha aasaasiga ah ee dhismaha.
Natiijadu waa dhismaha beerta oo qummaniyada oo la siinayo jawi wanaagsan oo loogu talagalay ubaxyo, geedo iyo khudrad.
Thanks to iyada, khudradda koray ayaa ku farxi doona joogitaankooda miiska oo dhan sanadka oo dhan.
Muuqaal sawir ah oo lagu koriyo, hoos fiiri: